Theresa Thompson, RN, BSN - Prairie Cardiovascular
Theresa Thompson, RN, BSN Springfield, Illinois
Vanachiremba vakanaka munyika chete kuna baba vangu.
Ndakarasikirwa nababa vangu musi wa4 Kukadzi, 2017, mazuva mashanu asara ekuzvarwa kwavo kwe5th. Ndichiri mudiki ndaigara ndichiona baba vangu sevasingakundiki. Aive mudziviriri wangu, murairidzi wehupenyu hwangu, gamba rangu !! Semunhu mukuru ndakaona kuti anogona kunge asiri nguva dzese asi ndakaziva kuti chero akafamba pasi pano aitove neni!! Saka pavakauya kwandiri muna 89 ndokundiudza kuti haaigona kubatsira mhuri yedu kutamira mumusha wedu mutsva nekuti airwadziwa muchipfuva achifamba kubva pamba achienda kubhokisi retsamba, ndakaziva kuti iye zvino aida kuti ndimubatsire kuti aende kuchipatara. vanachiremba vakanaka munyika.
Ndakashanda nemaDoctors ePrairie kubvira 1982 uye ndaiziva kuti ndivo vega chiremba wemoyo wandaizovimba kuti ndichengete baba vangu. Chiremba wake wekutanga wemwoyo aive Dr. James Dove. Akaita heart cath yake uye akakurudzira bypass operation. Pasi pekutarisirwa kwevanaChiremba vePrairie, baba vangu vakapora nekukurumidza uye zvisina tsarukano. Akajoinha cardiac rehab uye anoenderera mberi nekutora chikamu kusvika mwedzi mishoma asati afa. Akanga ari mumwe we "nyeredzi" nhengo dzavo, achitora chikamu uye achitungamirira vamwe pakufamba kwegore negore.
Kunyange zvazvo baba vangu vakatevera mitemo yose, vakadya zvakanaka, vakarega kusvuta, uye vakanwa mishonga yavo; chirwere chake chemwoyo chakawedzera. Zvinosuruvarisa, aive ne "majeni akaipa". Pamusoro pehosha yavo yetsinga yemwoyo baba vangu vaivewo neBP, high cholesterol, peripheral vascular disease, bradycardia, uye pakupedzisira aortic stenosis.
Kwemakore makumi maviri nematatu akatevera baba vangu vakaona vazhinji veVanachiremba vePrairie uye vaive nekurapa kwakawanda uye maitiro. Mwoyo makate, stents, zvidzidzo zveperipheral, mishonga yakawanda, pacemaker, uye pakupedzisira mwoyo wechipiri wakazaruka kuti utsive valve yake yeaortic.
Vamwe vevanachiremba vakachengeta baba vangu mumakore apfuura ndiDr. James Dove, Dr. Wes Moses, Dr. Krishna Rocha-Singh, Dr. Robert Woodruff, naDr. James Mullin.
Ndinotenda zvechokwadi kuti ndingadai ndakarasikirwa nababa vangu muna 1994 dai pasina kuchengetwa kwaakaitwa kubva kuna vanachiremba, vanamukoti, uye matekiniki anoshanda kuPrairie Heart Institute. Aida Prairie nevanhu vese vaimuchengeta. Aida hupenyu uye zvikwata zvekutarisira kuPrairie zvakamubvumira kuti ararame zvizere !!
Ndinokutendai kubva kumhuri yaClifford (Bill) Henderson
Vanachiremba vekuPrairie vakakubatsira sei?
Kana uine mibvunzo kana uchida kuronga kuona chiremba wemwoyo wePrairie, fonera Prairie Cardiovascular at 217-788-0706.
Tsvaga Prairie Chiremba